Izindaba - Ukuqapha nokugcinwa kwe-Transformer
I-Transformer yohlobo lwebhokisi
Ibhokisi Legatsha Lekhebula
I-Dry Type Transformer
I-Transformer ecwiliswe ngamafutha
Ukuqapha nokugcinwa kwe-Transformer
Mayelana namafutha e-transformer
Ithini indima kawoyela we-transformer ocwiliswe ngamafutha
Transformer Amafutha Properties
Ukunqunywa kwekhwalithi kawoyela we-transformer
Izinyathelo zokuqapha ukusetshenziswa okuphephile kwama-transformer
Ukuhlaziywa Kwembangela Yokuvuza Kwamafutha Ku-Transformer
Indlela yokuthola ukuvuza
Izinyathelo zokuthuthukisa ukuchitheka kukawoyela
Izinyathelo zokuvimbela ukuvuza kwamafutha
Isigaba sokuvuza kwamafutha e-Transformer
Ingozi yokuvuza kwamafutha e-transformer
Mayelana nesakhiwo kanye nesimiso se-transformer
Indlela Ama-Transformers Asebenza Ngayo
Izingxenye eziyinhloko nemisebenzi yama-transformers
Izinhlobo ze-Transformer nezici
I-transformer iqala ukusebenza
Uyini umehluko phakathi kweziguquli zohlobo lukawoyela kanye neziguquli zohlobo olomile?
Ukuze kuqinisekiswe ukusebenza okuvamile kwe-transformer, idinga ukuqapha nokugcinwa njalo.
1 Inani lokubonisa izinga lokushisa lesilawuli sezinga lokushisa kufanele liqashwe njalo, ukusebenza kwe-transformer kufanele kubanjwe ngesikhathi, futhi kufanele kuqashelwe ukuthi kukhona yini umsindo ongavamile nokudlidliza.
2 Uma umthwalo wesigaba sesithathu se-transformer ungalingani, okwamanje wesigaba esikhulu kunazo zonke kanye nokushisa kwesigaba esiphezulu kufanele kuqashelwe.Isilinganiso esiphezulu esivumelekile samanje esimaphakathi se-transformer esixhunywe ku-Yyn0 singama-25% wamanje we-voltage ephansi.Ubuningi bamanje obungathathi hlangothi obuvunyelwe yi-transformer ye-Dyn11 bungase bufane nomugqa ophansi wamanje.
3 Uma i-transformer inezimo ezilandelayo, njengokusebenza okungavamile kwesiphephetha-moya;ukubonisa izinga lokushisa okungavamile;imifantu emincane ekubukeni kwe-insulation ye-resin emazombezombe, njll., ayivunyelwe ukugijima ngale kwe-nameplate.Thola isizathu noma uxhumane nomkhiqizi ukuze uthole isiqinisekiso.
4 Ezindaweni ezomile nezihlanzekile jikelele, hlola kanye ngonyaka noma isikhashana;kwezinye izindawo, njengokugijima emoyeni onothuli noma obhuquza, hlola njalo ezinyangeni ezintathu kuya kweziyisithupha.Ezindaweni ezingcoliswe kakhulu, ukuhlolwa kokulungisa ukuphela kukagesi kufanele kwenziwe njalo ngenyanga.
5 Ngesikhathi sokuhlolwa, uma kutholakala ukuqoqwa kothuli ngokweqile, kufanele kususwe ukuze kuqinisekiswe ukujikeleza komoya futhi kuvimbele ukuwohloka kwe-insulation, kodwa ama-agent okuhlanza okuguquguqukayo akufanele asetshenziswe.Umoya ocindezelwe ukhipha uthuli emiseleni yokukhipha umoya.Isiqondiso sokugeleza komoya ocindezelweyo siphambene nesomoya opholile lapho i-transformer isebenza.
6 Hlola ukuthi izixhumi nezixhumi zikhululekile yini, noma izingxenye ze-conductive nezinye izingxenye zinezinsalela zokugqwala nokugqwala, futhi bheka ukuthi azikho yini izinsalela ze-carbonization kanye nokugqwala kukagesi endaweni ebamba ukushisa.Uma kutholakele, thatha izinyathelo ezifanele zokubhekana nakho.
Isikhathi sokuthumela: Jan-20-2022
Ngemibuzo mayelana nemikhiqizo yethu noma uhlu lwamanani, sicela usishiyele i-imeyili futhi sizokuthinta kungakapheli amahora angama-24.uphenyo
Inkampani Guangdong Shengte Electric Co., Ltd.
© Copyright 2021: Wonke Amalungelo Agodliwe.